DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA AMD RADEON HD 6800 SERIES - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Chọọnụ ma budata ọkwọ ụgbọala maka AMD Radeon HD 6800 Series
Ngalaba ezinụlọ nke Google Play Market na-enye ọtụtụ egwuregwu, ngwa, na usoro nkụzi maka ụmụaka na ndị mụrụ ha ka ha na-egwuri egwu ọnụ. Isiokwu a ga - enyere gị aka ịghara inwe mgbagwoju anya na ụdị dịgasị iche iche ma chọpụta ihe nwa gị chọrọ maka mmepe nke ike ya na ọgụgụ isi ya.
Na-emepụta bọọdụ igbe mebere nke ụmụ gị nwere ike iji ngwa ị họọrọ. Ụmụaka na-egbochi ịzụrụ ihe ma ghara ikwe ka ịwụnye ngwa ọhụrụ. Ọrụ oge na-enye gị ohere ịchịkwa oge eji n'azụ ihuenyo. Maka ike ịmepụta profaịlụ dị iche, ndị nne na nna ga-enwe ike ịmepụta ebe dị iche iche ngwa ngwa maka ọtụtụ ụmụ dị ka afọ. Iji wepụ ngwa ahụ ma gbanwee ntọala, ị ga-achọ itinye koodu PIN.
Na-egwu egwu na ebe ụmụaka nọ na nwata, nwatakịrị ahụ agaghị adaba na akwụkwọ nke aka gị, agaghị enwe ike ịkpọ onye ọ bụla, ma ọ bụ zipu SMS, ma ọ bụ rụọ ọrụ ọbụla ị ga-akwụ. Ọ bụrụ na n'oge egwuregwu na ama, nwa gị na-akpaghị aka na bọtịnụ na-ezighị ezi wee gaa ebe ọ na-adịghị mkpa, nhọrọ a bụ maka gị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ n'efu, ụfọdụ njirimara dị na mbipụta kachasị elu, nke na-efu 150 rubles.
Download ebe ụmụaka
Ihe ntanye n'efu nke ga-amasị ọtụtụ ndị na-eto eto. Igwe a na-egbuke egbuke na ederede dị iche iche na-enye gị ohere ịmepụta ihe oyiyi anwansi, chebe ha ma mee usoro ntanetị ugboro ugboro. Dị ka nzụlite, ịnwere ike iji foto sitere na gallery ahụ, tinye foto ndị na-adọrọ mmasị na ha ma kesaa ọrụ gị na netwọk mmekọrịta. Ihe karịrị iri abụọ ụdị brushes nwere ihe ndị dị iche iche na-eme ka nwatakịrị chepụta echiche na ihe okike.
Ikekwe ihe nzaghachi nke ngwa a - mgbasa ozi, nke na-enweghị ike iwepu ya. Ma ọ bụghị ya, ọ dịghị mkpesa, ngwá ọrụ dị ukwuu maka mmepe nke echiche.
Ibudata Omume Ụmụaka
Ihe eji agba agba maka ụmụaka nke afọ dị iche iche. N'ebe a ị pụghị ịbịaru, kama na-amụkwa Bekee maka olu nke agba aha na maka akwụkwọ ozi na mmemme dị na nbudata ngwaọrụ. Ikike na-egbuke egbuke na mmetụta dị mma agaghị ekwe ka nwatakịrị gwụ ya, na-agbanwe usoro ihe nkiri ahụ n'ime egwuregwu na-akpali akpali.
Iji tufuo mgbasa ozi na ịnweta ntaneti ndị ọzọ, ị nwere ike ịzụta ngwà zuru oke dịka 40 rubles.
Download akwụkwọ agba
Egwuregwu akụkọ na egwuregwu agụmakwụkwọ maka ụmụaka
Otu n'ime ndị kasị mma na gam akporo nchịkọta akụkọ ifo maka ụmụaka. Ejiji mara mma, interface dị mfe na atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị mere ka ngwa a guzosie ike na mpi ahụ. N'ihi ego ego kwa ụbọchị n'ụdị chests, ị nwere ike ịchọta mkpụrụ ego ma zụta akwụkwọ n'efu. Obere egwuregwu na oge dị n'etiti ịgụ na-enye nwa ahụ ohere izuike ma ghọọ onye na-ekere òkè kpọmkwem n'ihe ndị na-ewere ọnọdụ na akụkọ ifo.
Ngwa ahụ nwekwara ihe ọzọ na-acha agba agba na mgbagwoju anya. Enwere ike iji ohere n'efu na enweghị mgbasa ozi site na ihe karịrị puku mmadụ iri ise, itinye ngwa ahụ dị elu nke 4.7 isi.
Download Fairy na akụkọ egwuregwu maka ụmụaka
Akwụkwọ Ime Anwansi nke Artie
A egwuregwu maka ụmụaka si 3 ruo 6 afọ na-adọrọ mmasị akụkọ na ndị mara mma mara mma. Na usoro nke na-agafe, ụmụaka ọ bụghị nanị na ha maara ọnụ ọgụgụ ihe okike (gburugburu, square, triangle), kamakwa na-amụta imenyere na inyere ibe ha aka. Ụmụaka na-adọkpụ, ha na-ezute n'ụzọ anụ ọhịa na ndị ụlọ ha tara ahụhụ n'ihi nnukwu anụ anụ ọjọọ. Akwụkwọ anwansi nke Artie weghachite ụlọ ndị e bibiri emebi, na-eto osisi na okooko osisi, si otú ahụ na-enyere ndị nọ n'ọnọdụ nsogbu aka n'ụzọ dị mfe.
N'oge egwuregwu ahụ, ị ​​nwere ike ịlaghachi na ihe ndị e mepụtara ugbu a na redraw ihe kacha amasị gị na ụdị ọzọ. Naanị akụkụ mbụ nke njem ahụ dị maka n'efu. Enweghị mgbasa ozi.
Download Anwansi Anwansi Artie
Usoro mgbakọ na mwepụ na nọmba maka ụmụaka
Usoro ihe omume maka ọzụzụ ọzụzụ na 10 na Russian na Bekee. N'ịbụ onye gere aha aha ahụ, nwatakịrị ahụ na-atụgharị na anụmanụ, na-ahụ otú e si ese ha ozugbo na-egbukepụ egbukepụ, mgbe ọ na-enwe ike ịgụpụta ụda olu, na-emegharị mgbe ọkà okwu gasịrị. N'ịbụ onye na-edekọ akụkọ ego, ị nwere ike ịga n'ihu na ngalaba iji dọpụta otu mkpịsị aka gị na ihuenyo ahụ. Ihe ngosi di omimi na umu anumanu dika umu, ya mere, ngwa ngwa ha muta ihe omumu. Ngwa ahụ nwekwara ohere igwu egwu "Chọta ụzọ", "Gụọ anụmanụ", "Gosi nọmba" ma ọ bụ "Mkpịsị aka." Egwuregwu dị na ọnụahịa zuru ezu 15 rubles.
Enweghị mgbasa ozi na usoro dị irè na-eme ka ngwa a bụrụ otu n'ime ihe kacha mma maka ụmụaka. Onye mmepụta a nwere mmemme ọzọ maka agụmakwụkwọ maka ụmụaka, dịka Alphabet Alphabet na Zanimashki.
Download mgbakọ na mwepụ na nọmba maka ụmụaka
Enweghi agwụ agwụ mkpụrụ okwu
Ngwa maka ịmụta akwụkwọ ozi Bekee, ụda na okwu. Ihe mgbagwoju anya gbasara ikwu okwu na ihe omimi di egwu na enyere umuaka aka icho akwukwo na ikwu okwu nke okwu Bekee. Mgbe ọ gwụsịrị ọrụ nke ide okwu site na akwụkwọ ozi ndị gbasasịrị na ihuenyo ahụ, nwa ahụ ga-ahụ obere oge na-akọwa ihe okwu ahụ pụtara.
Dịka na ngwa gara aga, ọ dịghị mgbasa ozi ebe a, ma ụgwọ nke nsụgharị akwụ ụgwọ, nke gụnyere ihe karịrị 100 mgbagwoju anya na mmegharị, dị elu. Tupu ịzụta ụdị zuru ezu, nye nwa gị ka ọ kpọọ n'efu n'eji okwu ole na ole tụlee otú uru dị otú ahụ ga-esi baara ya uru.
Ibudata akwukwo ogugu
Egwuregwu ihe mgbagwoju anya site na Intellijoy, onye na-ewu ewu nke ngwa ngwa agụmakwụkwọ ụmụaka. 20 mgbagwoju anya site na ụdị "Animals" na "Food" dị maka n'efu. Ọrụ a bụ iji nchịkọta zuru ezu na-ese foto zuru ezu, mgbe e mesịrị ihe oyiyi nke ihe ma ọ bụ anụmanụ na-egosi na ụda aha ya. N'oge egwuregwu ahụ, nwa ahụ na-amụta okwu ọhụrụ ma na-azụlite ezigbo nkà na ụzụ. Nhọrọ nke ọkwa dị iche iche na-enye gị ohere ịhọrọ mgbagwoju anya dị ka afọ na ikike nke ụmụaka.
Na nsụgharị akwụ ụgwọ, nke na-efu ihe ruru 60 rubles, 5 ọzọ edemede na-emeghe. Na-enweghị mgbasa ozi. Ihe ọzọ dị mma maka mgbagwoju kaadiboodu maka ịzụlite echiche ziri ezi.
Nbudata Na-anakọta Ihe Obi Ụtọ Foto
Egwuregwu na-arụ ọrụ nke ụmụaka nwere ike iji ihe dịgasị iche na ihe odide dị iche iche na ụlọ ha. Lelee TV na ime ụlọ ahụ, na-egwu na ntụrụndụ, na-eri nri na kichin ma ọ bụ na-azụ azụ dị na akwarium - a ga-eme ihe a na ọtụtụ ihe ọzọ site n'ịkpọ otu n'ime ndị ezinụlọ anọ. Mgbe niile na-emeghe atụmatụ ọhụrụ niile, ụmụ anaghị enwe mmasị na egwuregwu ahụ.
Maka ego ọzọ, ị nwere ike ịzụta ọhụrụ tinye-ons na egwuregwu isi na, dịka ọmụmaatụ, gbanwee ụlọ gị n'ime ụlọ Enchanted. Egwuregwu a na nwa gị, ị ga-enweta ọtụtụ obi ụtọ na mmetụta dị mma. Enweghị mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na nwatakịrị nwere mmasị na ohere, kpakpando na mbara ala, ị nwere ike ịzụlite ọchịchọ ịmata ya na ịmeghe ihe nzuzo nke Eluigwe na Ala, na-emegharị smartphone gị na mbara ụwa atọ. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta mbara ala nke Solar System, gụọ ihe ndị dị ụtọ na ozi zuru ezu banyere ha, lee gallery ahụ na foto site na mbara igwe, ọbụnakwa na-amụta banyere satellite na telescopes niile na-edebi Ụwa na nkọwa nke nzube ha.
Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịmepe mbara ala ahụ ozugbo. Maka mmetụta kachasị ike, oyiyi ahụ nwere ike igosipụta na nnukwu ihuenyo. Naanị ala bụ mgbasa ozi. Ihe zuru oke nke mbara ala dị na ọnụahịa nke 149 rubles.
Ibudata Walk Walk
N'ezie, nke a abụghị ndepụta zuru oke nke ngwa ngwa maka mmepe ụmụaka, e nwere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ n'ime ha, gbalịa ịchọta mmemme ndị ọzọ nke onye mmepụta ahụ mepụtara. Echefukwala ịkọ ahụmahụ gị na ihe ndị ahụ.